Ethnic Nationalities Voice တိုင်းရင်းသားအသံ: ဗမာပြည်အပေါ်ကုလသမဂ္ဂအရေးယူမှုကိုဘာကြောင့် အဆုံးအဖြတ်ပေးသည့်ခြေလှမ်းလို.ပြောနိုင်သလဲ?
The Washington Post အယ်ဒီတာ့အာဘော်
"When there is genocide in Darfur; systematic rape in Congo; or repression in Burma -- there must be consequences. . . . And the closer we stand together, the less likely we will be faced with the choice between armed intervention and complicity in oppression.
`ဒါဖိုမှာလူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု၊ကွန်ဂိုမှာစနစ်တကျမုဒိန်းကျင့်မှု၊ဗမာပြည်မှာ ဖိနှိပ်ချုပ်ခြယ်မှုတွေဟာ အကျိုးဆက်တွေလိုက်လာမှာပါ၊ကျနော်တို.အ တူတကွနီးနီကပ်ကပ်ရပ်တည်လာလေ စစ်ရေးအရဝင်စွတ်ဖက်ခြင်းနှင့်ဖိနှိပ်မှုတွင်ပါဝင်ခြင်းအကြားရွေးချယ်ရမည့်အခြေအနေနဲလာလေဖြစ်သည်”
(ကျနော်တို.အတူတူရပ်တည်ကြမယ်ဆိုရင် စစ်ရေးအရဝင်စွတ်ဖက်မှုနှင့်၊ဖိနှိပ်မှုတွင်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျပါဝင်ပတ်သက်မှုအကြားရွေးစရာမလိုဘဲပွဲက ပြီး သွားနိုင်တယ်လို. အဓိပ္ပါယ်ရသည်။)
တိုင်းရင်းသူအမျိုးသမီးအားမုဒိန်းကျင့်မှု၊ကလေးတွေကိုပေါ်တာစေခိုင်းမှု၊ရွားပေါင်း ၃၅၀၀ ကိုမီရှို.ပစ်ခြင်းလူ၊သန်းနှင့်ချီနေအိမ်ကနေထွက်ခွာရခြင်းတွေ ဟာဗမာစစ်ခေါင်းဆောင်များ စပွန်ဆာ=တာဝန်ယူထားသည့် ဗမာစစ်တပ်၏စစ်ရေးဗျူဟာအဖြစ်အသုံးပြုနေခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်၊ယင်ကဲ့သို.လုပ်ရပ်သ ည် လူသားတွေအပေါ်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်သည့်လုပ်ရပ်ပင်ဖြစ်သည်။
အိုဘာမားအစိုးရသည် အထောက်အထားခိုင်လုံကြောင်းကိုသိထားသည့်အတွက်ကြောင့်ဗမာစစ်ခေါင်းဆောင်များ၏အမှုကိုအမြန်ဆုံးတရားစွဲဆိုနိုင်မှာဖြ စ်သည်၊
စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်ကဘာလုပ်ပေးနိုင်မလဲလို.မေးသည့်အခါ ယင်ကော်မရှင်သည်သန်းရွှေစစ်ခေါင်းဆောင်များချမှတ်ထားသည့် အမျိုးသမီးများအားမုဒိန်းကျင့်မှု၊တိုင်းရင်းသားများမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုပေါ်လစီကိုအောက်စစ်ဗိုလ်အရာရှိငယ်များအနေနဲ.ဆက်လက်မကျင့်သုံးဘဲသူတို. အနာဂတ်အတွက်လည်းတောက်ပလာမယ်၊အတိုက်အခံအင်းအားစုများအတွက်လည်းအားတက်စေနိုင်မည်ကိုမီးမောင်ထိုးပြလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထို.အပြင်၊အာဏာရှင်နိုင်ငံများအနေနဲ.သစ်တွေ၊သဘာဝဓါတ်ငွေ.တွေကိုရောင်းချပြီးရွေးကောက်ပွဲအတုများကျင်းပပေးပြီးအရပ်သား အစိုးရအဖြစ်သို.အသွင်ပြောင်းခြင်းရန်လုပ်ရပ်သည် ဘယ်လောက်ဘဲကြိုးစားပါစေ ရာဇဝတ်ဘေးပြေးမလွတ်နိုင်ဘူးဆိုတာကို အခြားသောအာ ဏာရှင်နိုင်ငံများအားလည်းသတိပေးကြေညာလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
Now, by deciding to supportaUnited Nations commission of inquiry into these misdeeds, the Obama administration has acknowledged the weight of the evidence and has testified to the urgency of holding criminals accountable for their crimes. It isamajor step forward. The U.N. special envoy for Burma (also known as Myanmar), Tom?s Ojea Quintana, has called for such an inquiry, citing the "the gross and systematic nature of human rights violations in Myanmar overaperiod of many years." In Congress there is strong bipartisan backing for such an inquiry. Most important, Burmese human rights activists and dissidents both inside and outside the country have supported such an inquiry, sometimes at great personal risk.